Hanin-kotrana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny teknolojia ara-pambolena amin'ny fitomboan'ny voanjo eny an-kalamanjana
Amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mahita tranga iray izay tsy ahitan'ny voanjo. Fantatry ny rehetra momba ny tsiro sy ny toetra mahasoa amin'io kolontsaina io, izany no mahatonga ny olon-dehibe sy ny ankizy ho tia azy io. Toy ny ao amin'ny henan'akoho, dia misy proteinina be dia be izy io, ary mora kokoa ny mandevina. Ny voankazo maitso maitso dia ahitana vitamina B, PP, C, carotene, phosphor, vy, ary lysine.
Inona no azo ambolena any amin'ny firenena amin'ny volana Jona, misafidy plantes amin'ny fitomboan'ny zaridaina
Ny tontolon'ny firenena dia tsy afaka mirehareha amin'ny fisian'ny faritra midadasika izay ahafahanao mametraka izay rehetra tian'ny fanahy. Noho izany, ny fandriana iray ihany dia tokony ampiasaina amin'ny fanangonam-bokatra isan-taona. В конце мая-в начале июня уже должно освободиться достаточно места после уборки ранних культур, и именно сейчас предстоит дилемма: оставить их пустующими или попробовать вырастить что-либо еще.
Ahoana no hambolena sy hikarakarana ireo tsaramaso ao an-jaridaina
Vao haingana, lasa be mpitia ny tsaramaso, satria be mpanankarena amin'ny vitamina sy mineraly maro. Amin'ny habetsan'ny proteinina ity legioma ity dia salama kokoa noho ny henan'akoho. Ny fambolena ny vokatra dia mahasarika ny fambolena any amin'ny toera-tany sy dacha. Sakafom-boankazo: famaritana ny voankazo voajanahary - zavamaniry ahitra ao amin'ny fianakaviana legume.
Vovobony ho an'ny vatana: fanangonana, tombontsoa, ​​fanoherana
Haricot dia iray amin'ireo zavamaniry fahiny, izay nambolena nandritra ny an'arivony taona. Amin'izao andro izao, karazana tsaramaso maherin'ny 20 no ampiasaina amin'ny fisakafoanana, ny tombotsoan'ny tsirairay amin'izy ireo ho an'ny vatan'olombelona dia mitovy, ary hafa ny tsirony sy ny fisehony. Ny vorona dia voalohany, proteinina, singa manan-danja ilaina amin'ny metabolism ary manamafy ny rafitra muscular.
Ny fomba mahazatra tsara indrindra ho an'ny tanimbary maitso mandritra ny ririnina ao an-trano
Tiantsika rehetra ary matetika mampiasa tazo maitso. Maro ireo salady malala no tsy misy azy. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hamaritra ny tombontsoa entiny isika, ary koa ny fomba hanakanana ireo voankazo maitso amin'ny fomba maro ao an-tokantrano. Rehefa manomana ny fikarakarana ny tenanao ianao, dia afaka manandrana voa tsara amin'ny ririnina.
Ny fomba hanamboarana tsaramaso ao anaty saosy tazo amin'ny ririnina: fomba tsotra sy mahasalama
Androany, tsy misy fomba iray ahafahana manangom-bokatra ho an'ny ririnina dia fantatra: mihosotra amin'ny endriny madio, amin'ny tomato paste, amin'ny endriky ny salady, miaraka amin'ny tsy misy vinaingitra. Ho an'ireo izay efa tiana sy mahazatra dia manolotra soso-kevitra iray isika. Momba ny tombotsoan'ny takelaka Ny tsindrin-tsakafo voatokana ho an'ny tsaramaso ao anaty saosy tazo ho an'ny ririnina dia tsara satria azonao atao ny mampiasa ny takelaka vita tsy misy.
Fomba ahoana ny mainty ny ahi-maitso ao an-trano
Manana vintana ny gourmets amin'izao fotoana izao: goavana ny fisafidianana ny vokatra, ary noho izany ny lovia izay azo amidy. Na izany aza, aza manary ny maha-zava-dehibe azy ary ny trano mahazatra izay vita avy amin'ny legioma voafantina. Izany koa dia mihatra amin'ny legioma, izay, raha arovana araka ny tokony ho izy, dia mety ho fitsaboana ho an'ny fitsaboana maro.
Biby maina: ohatrinona ny kaloria, inona ny vitaminina voarakitra, inona no mahasoa, ny vehivavy bevohoka
Biby maina - iray amin'ireo zavamaniry tranainy indrindra, izay heverina fa Amerikana Atsimo. Na izany aza, fantatra mazava tsara fa nambolena tany Roma sy Ejipta fahiny ilay zavamaniry. Ankoatra izany, io karazana io dia voaresaka ao amin'ny tantara sinoa tamin'ny 2800 talohan'i JK. Ny voankazo amin'io zavamaniry io dia manana toetra mahasoa maro ary sakafo tsy azo ivalozana.
Ravinkazo mena: fananana mahasoa sy famafy eo amin'ilay tranokala
Maro ny karazana clover. Saingy amin'ny fomba fitsaboana sy ny fomba fitsaboana medikaly nentim-paharazana, matetika ny mofomamy mena no ampiasaina, eo am-pelatanany ny famokarana medikaly sy homéopathique. Ireo singa amin'ny fampiasana sy ny fambolena ny zavamaniry dia handinika ao amin'ny lahatsoratra. Famaritana ny botanika Ity zavamaniry ity dia fantatra kokoa amin'ny anarana hoe tavy kavoana, ary ny anarana botanika amin'ny teny latina dia Trifolium praténse.
Ahoana ny fomba ahafahan'ny soja maniry any an-trano sy ny fomba ilana azy
Ny mpanohana ny sakafo mahazatra dia matetika misolo toerana ny sakafon'ny biby miaraka amin'ny legioma. Na izany aza, amin'ity tranga ity, maro no miatrika ny olan'ny fanonerana ny proteinina sy ny zavatra hafa mahasoa ao amin'ny vatana. Hatramin'izao, dia efa be dia be ny vokatra avy amin'ny orinasa mpamokatra izay afaka manolo ny proteina biby ho an'ireo izay tsy mampiasa izany noho ny antony rehetra.
Ny fampiasana ny ala honko
Ny fahitana ny làlan-dalan'ny lohataona dia antsoin'ny olona hoe crane ary anarana fito ambin'ny folo hafa no manondro ny fihetsika tsy miraharaha ny olona iray amin'io ahitra io, ny fahalianany ary ny fanajany ireo toetra sarobidy maro samihafa. Ary, ny zavamaniry iray izay tanteraka, araka ny filazan'izy ireo, avy amin'ny tady ho amin'ny fakany, dia afaka mandray soa ho an'ny olona, ​​fa tsy mendrika ny mijery azy ireo.
Beanina dia mahalana sy tena ilaina eo amin'ny latabatrao. Mihinam-boina, mena, voatoto. Ny loharano misy singa mahasoa maro dia lasa iray amin'ireo vokatra fototra amin'ny sakafo. Diniho ny fomba hanomanana tsaramaso amin'ny ririnina amin'ny fomba maro. Ny tombontsoa avy amin'ny voankazo Ny karazana vitamina sy singa miavaka dia manondro ny ilana ny legioma eo amin'ny sakafo.
Senna Alexandria, na taratasy misy an'i Alexandria: famaritana sy fananana zavamaniry
Ny takelaka Alexandria koa dia fantatra amin'ny anaran'ny African Cassia, Holm Cassia, Ejiptiana Senna. Ny zavamaniry dia ampiasaina amin'ny fomba fitsaboana nentim-paharazana sy nentim-paharazana, ka ny firenena sasany dia miompana manokana amin'ny fambolena azy toy ny fanafody azo avy amin'ny fanafody. Famaritana momba ny botanika Manan-tsinay eo anoloanay isika, izay an'ny fianakaviana legume.
Sinoa lohataona na sachevichik - zavamaniry mahazatra, manana toetra manokana. Rehefa ampiasaina amin'ny fomba diso dia lasa poizina ny lanjany, fa amin'ny fomba tsara handraisana ny famolavolana sy fampiasana ny serment, dia lasa zava-mahadomelina izay afaka mamonjy anao amin'ny aretina maro. Andao hiresaka momba ny toetran'ity zavamaniry ity sy ny fomba fisainany.
Mofomamy mena: fomba fanamboarana, fomba haingana mahandro
Raha ny marina, ny sakafo rehetra ilaina amin'ny vatany - proteinina maivana maivana, matavy tsy misy kolololola ary vitaminina mineraly mpanankarena - dia angonina ao anaty voankazo mena. Raha ny marina, ny legioma irery dia afaka manolo ny vokatra hafa rehetra. Andao hianatra bebe kokoa momba ny fiantraikany eo amin'ny vatan'ny voankazo mena sy ny fomba ahafahana miomana.
High-yielding and healthy: Variety of pink spam tomatos
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny holatra sy ny holatra?
Fanafody volavola hiadiana amin'ny tendron'ny spider: savony, salama ammoniac, tongolo sy tongolo lay
Ahoana no hikarakarana sy hitombo ao amin'ny zaridaina
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hanin-kotrana